सिड्नी । अष्ट्रेलियामा शनिबार देशभरी संघीय निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ । विस्तृतमा
बलात्कारको आरोपमा अष्ट्रेलियामा एक नेपाली युवा पक्राउ
एजेन्सी । सन् २०१७ मा अमेरिकाबाट अष्ट्रेलिया घुम्न आएको एक नेपाली युवालाई बलात्कारको अभियोगमा एनएसडब्लु प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यी देशहरुमा छ सबैन्दा धेरै क्यानसर रोगीहरुको दर, अष्ट्रेलिया पहिलो स्थानमा ?
एजेन्सी । क्यानसरका कारण विश्वभर हजारौँ मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको छ । यो रोगको समयमा नै उपचार हुननसक्दा धेरै मानिसहरुले अकालमा ज्यान पनि गुमाएका छन् ।
यी हुन् विश्वमै सबैभन्दा धेरै सुन उत्पादन गर्ने देशहरु, अष्ट्रेलिया कति औँ स्थानमा ?
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जसले सुन व्यापारबाट समेत ठुलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । सुन उत्पादन गर्ने मामिलामा सबैभन्दा अगाडि चीन रहेको छ ।
श्रीलंका आक्रमणः ब्रिटेन–अष्ट्रेलियासम्म यसरी जोडियो अनुसन्धानको डोरी
एजेन्सी । सिरियल बम ब्लास्ट घटनामा श्रीलंकाका रक्षामन्त्री रुवन विजयवर्धनेले पनि सुरक्षा प्रवन्धमा ठुलो भुलचुक भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘
अष्ट्रेलियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरु
अष्ट्रेलिया अर्वपतिहरुको सुची ठुलै रहेको छ । उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । अर्वपतिहरुको पहिलो सुचीमा गिना राइनहार्ट रहेकी छिन् ।
अस्ट्रेलियामा एक नेपाली युवकको निधन
सिड्नी । अस्ट्रेलियामा एक नेपाली युवकको निधन भएको छ ।
मेलवर्नमा जनगायक जीवन शर्माको सांगितिक प्रस्तुति
मेलवर्न । जनगायक जीवन शर्माले अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा सांगितिक प्रस्तुति दिएका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा सांगितिक कार्यक्रमको लागि अष्ट्रेलिया पुगेका उनले सोमबार साँझ इस्टोनियन हाउमा उनले सांगितिक प्रस्तुति दिएका हुन् ।
एनआरएन अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा कंडेलको उम्मेदवारी, को हुन् कंडेल ?
सिड्नी । गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा पदको लागि केशव कंडेलको उमेदवारीको घोषणा गरेका छन् । बिगत दुई दशकदेखि अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका कंडेलले शनिबार फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै आफूले उम्मेदवारी दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
अष्ट्रेलियाको सडकमा दिउँसै तीन जना महिलाले अश्लिल हर्कत गरेपछि...
ब्रिसबेन । अष्ट्रेलियास्थित ब्रिसबेनको फोर्टी भ्यालीमा नसामा धुत रहेका महिलाहरुले लाजको सबै सिमा नाघेका न् । तीन जना समुहमा रहेका महिलाले खुलेआम सडकमा नै सेक्स गरेपछि लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।